Nagu saabsan - Anping Shiheng Medical Instruments Co., Ltd.
Alaabtayadawuxuu ka sarreeyaa heerarka caalamiga ah ee tayada iyo amniga, oo ay ku jiraan CE iyo FDA. Tayada iyo heerarka caadiga ah waxay helayaan ammaan sare oo joogto ah oo macaamiisha gudaha iyo shisheeyaha ah.Waxaan sidoo kale nahay soo saaraha OEM ee badeecada caalamiga ah ee lafaha. Sanadihii la soo dhaafay, wax soo saarkayaga waxaa loo dhoofiyaa Yurub, Ameerika, Afrika, koonfur bari Aasiya iyo dalal kale.
Kooxdayada xirfadeed Waxaan si joogto ah ugu adeegi doonnaa macaamiil kasta, kalsoonidaadu waa aqoonsiga ugu weyn ee adeegyadeena.Waxaan si isdaba joog ah u soo bandhigi doonnaa badeecooyin cusub oo suuq geyn ah sida ku xusan baahida suuqa ee ku tiirsan alaabada tayada sare leh isla markaana xaqiijinaya iskaashiga guusha-macaamiisha.
Anping Shiheng Qalabka Qalabka Caafimaadka Co., Ltd.
Waa shirkad takhasus gaar ah u leh qalabka caafimaadka iyo isboortiga oo iibisa qalabka caafimaad ee baxnaaninta & qalabka isboortiga Shirkaddu waxay leedahay warshad u gaar ah, oo baaxadeedu ka badan tahay 12000 mitir murabac, oo leh afar aqoon isweydaarsi qalliin iyo in ka badan 200 shaqaale farsamo khibrad leh. sidoo kale hogaamiya bixiyeyaasha taageerada orthopedic ee waqooyiga Shiinaha.
Waxaan u heellan nahay horumarinta, soo saarista iyo iibinta orthopedic orthoses, kab iyo wax soo saarka dhaqan celinta iwm. ugu sarreeya.
Xirfadlayaal R & D iyo isgaarsiinta farsamada muddada-dheer ee khubarada isbitaalka awood u leh inay hubiyaan in badeecadaheena ay gaarsiiyaan shaqooyinka ugu badan iyo raaxada jirka bini'aadamka. kab iyo ulo iwm.
1. S: Ma waxaad tahay shirkad xaqiiqo wadata ama shirkad ganacsi?
J: Annagu waxaan nahay warshad, ku takhasusay soo saarista xargaha lugaha iyo isboortiga, waxaan ahayn 15 sano.
waxaan damaanad qaadi karnaa qiimahayagu waa gacanta hore, Tayo sare iyo qiimo tartan leh.
2. S: Sideen u dalban karaa amar?
J: Waxaad la xiriiri kartaa mid ka mid ah shaqaalaheena iibka ah amar. Fadlan bixi faahfaahinta shuruudahaaga sida ugu macquulsan. Marka waxaan kuu soo diri karnaa dalabka markii ugu horreysay.
Naqshadeynta ama wadahadal dheeri ah, waxaa fiican inaad nala soo xiriirto Skype, TradeManger ama ama Wechat ama QQ ama WhatsApp ama siyaabo kale oo deg deg ah, haddii ay dhacdo dib u dhac kasta.
3. S: Goorma ayaan heli karaa qiimaha?
J: Badanaa waxaan soo xiganaa 24 saacadood gudahood ka dib marka aan helno baaritaankaaga.
4. S: Ma samayn kartaa naqshadeynta annaga iyo OEM ODM?
J: Haa. Waxaan haynaa koox xirfadlayaal ah oo khibrad hodan u leh qaabeynta sanduuqa hadiyadaha iyo wax soosaarka kaliya noo sheeg fikradahaaga waxaanan kaa caawin doonaa sidii fikradahaaga loogu fulin lahaa sanduuqyada saxda ah
5. S: Muddo intee le'eg ayaan filan karaa in tijaabada la ii qaado?
J: Ka dib markaad bixiso khidmadda muunadda oo aad noo soo dirto faylal la xaqiijiyay, shaybaaraduhu waxay diyaar u yihiin bixinta muddo 1-3 maalmood ah. Shaybaarada ayaa laguugu soo diri doonaa adoo isticmaalaya xawaare sare waxayna imaanayaan 3-5 maalmood. Waxaan ku bixin karnaa muunada lacag la'aan laakiin ma bixin doonno kharashka xamuulka.
6. S: Ka waran waqtiga hogaaminta wax soo saarka badan?
J: Si daacadnimo ah, waxay kuxirantahay tirada amarka iyo xilliga aad amarka siiso. Alway 10-30 maalmood oo ku saleysan amar guud.
7. S: Waa maxay shuruudahaaga gaarsiinta?
A: Waxaan aqbalnaa EXW, FOB, CFR, ClF, iwm Waxaad dooran kartaa midka kuugu habboon kharashka kuugu habboon.
8 S:. Waa maxay habka lacag bixinta?
A1) Waxaan aqbalnaa Paypal, T, Wester Union, L / C, D / A, D / P, MoneyGram, iwm.
9. S: Halkee ku xidhan tahay warshaddaada? Sidee ayaan ugu booqan karaa halkaas?
J: Warshaddeena waxaa lagu raray Degmada Anping, Gobolka Hebei ee Shiinaha, oo u dhaw Beijing
10. S: Sidee ayey warshadaadu u eegtaa arrimaha ku saabsan xakamaynta tayada?
J: Si loo hubiyo in macmiilku iibsado agab iyo adeeg tayo fiican leh.
Kahor amarka meeleynta macaamiisha, waxaan u soo diri doonnaa shaybaar kasta macmiilka si loo ansixiyo.
Kahor rarka, shaqaalaheena caafimaad ee Shiheng waxay hubin doonaan tayada 1pcs 1pcs.Quality waa dhaqankeena.
Waxaan sidoo kale sameyn karnaa waxyaabaha soo socda
4. Logo loo habeeyay, sumadda wax lagu dhaqo, xirmo, kaarka midabka, aqbal sanduuqa midabka.
5. Nakhshadeeye naqshadeeye iyo shaqaale xirfad leh ayaa soo saari kara wax soo saarka adiga gaarka ah.
Tayada heerka 6.High, oo leh shahaadada CE / FDA iyo shahaadada ISO
9.Garanti waqti dheer ah iyo iibin kadib
10. Waa rabitaankeenna inaan si weyn u weyno macaamiisheenna